QORALKA Afka Somaliga - Samawadenews
MUXAADARO: Sh. C/rashiid Sh. Cali Suufi & Sh.Maxamed Umal.
Xisbi Siyaasadeed oo SAHAN lagu magacaabay oo Muqdisho lagaga dhawaaqay.
Mucaaradka Jabuuti oo ka Qayliyey xaalka Askari lagu ciqaabay Jeelka, fariin adagna u diray Madaxweyne Geelle.
Jabuuti: Walaalka la dhashay Askarigii sida xun loola dhaqmay xabsiga oo Fariin diray.
Dowladda Federalka Somalia oo dib u furaysa Duulimaadyadii Gudaha Dalka.
Xukuumada S.land oo Agab Caafimaad u kala dirtay degmooyinka Dalka.
Jabhadii Xaqdoon ee G. Sanaag oo la soo afjaray.
Xaaska Askarigii reer Jabuuti: “Ninkaygu maalintii uu xaqiisa doontay ayuu geerida u badheedhay”
Askari reer Jabuuti ah oo soo duubay Muuqaal isagoo cadaalad darro xabsi ugu jira.
Siyaasiinta Soomaalida Woqooyi Bari Kenya oo u mahadceliyey Uhuru Kenyata
Shacabka Laascaanood oo ka cabanaya Ambulance la’aanta ka jirta Cisbitaalka Guud.
Wareysi Gaar ah: Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow “Arrinta Matalaada Baarlamanka ayaa go’aan ka gaadhaya”
Siyaasi Nuuradiin Diini: “Madaxweyne haday daacad kaa tahay Doorashada u qabo sidii Daahir Rayaale”
Militariga Maraykanka oo lagu soo daadiyay Jidadka Washington DC, agagaarka Aqalka Cad iyo Mudaharadyada oo weli socda.
Guddiga Qaran ee maalmaha Xorriyadda oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Sh. Maxamed Idris oo ka hadlay Doorashada Mucaaradka & Muxaafadka.
Waraysi gaar ah: Sh. Yuusuf Madaale “Matalaada Muqdisho ee Aqalka Sare waa sharci darro”
Muqdisho: Ciidanka Booliska oo Fashilay Qarax miino oo dhulka lagu Aasay.
Tirada dadka laga helay Covid-19 ee Soomaaliya oo kor u dhaafay 2000 oo qof.
Maamulka G. Banaadir oo sheegay in Nadaafad xumadu ay qayb ka tahay Amni xumada Muqdisho.
Warbixinta maalinlaha ee Covid-19 S.land iyo dad Ajaanib ah oo laga helay.
United States: Badhasaabka Minnesota: Tim Walz oo u mahadceliyey shacabka Minnesota. Toos u Daawo
C/laahi Jawaan: “29ka sano waxaan ogalahay wixii khaldan in la saxo, saami qaybsiga, Cadaalad in la helo, ummadda la gaadhsiiyo wixii Khayraad ah”
Khilaafkii Madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo xal loo helay.
Madaxweynaha Puntland oo dhaliilay Dowlada Federalka Somalia.
Badhasaabka G. Awdal oo beeniyey in Danyar laga musuq maasuqay Raashin
Dowladda Jabuuti oo deeq gaadhsiisay Beledweyne.
Madaxweyne Muuse Biixi oo soo xidhay wejigii 2aad ee Shaqo Qaran.
Mudaharaadka Minneapolis ee dalka Maraykanka iyo wararkii ugu dambeeyey.
Jigjiga: Siyaasiin looga digay hurinta colaad beeleedyada.
G. Banaadir oo markii ugu horeysay Matalaad ku yeelanaysa Aqalka Sare.
Sh. Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay xasuusihii Kacaanka & Siyaad Barre
Soomaaliya oo sheegtay in Todobaadka soo socda ay dib u furayso Duulimaadyada.
Guddoomiyaha G. Saaxil oo Fariin u diray Shacabka.
Xukuumada Somalia oo rukhsadii kala noqotay Diyaarado laga leeyahay Dalka Kiiniya.
Xeerarka dhamaystirka habraaca doorashooyinka oo la soo gebogabeeyey.
Xaalada Boobka Dadka madowga ah ee Maraykanka.
Dowladda Somalia oo Agab Caafimaad gaadhsiiyey maanta magaalada Gaalkacyo.
Munaasabad lagu dhaarinayey Kalkaaliyaal Garsoore oo Muqdisho lagu qabtay.
Isbahaysiga Hiigsi Qaran oo Dacwad ka gudbiyey Baarlamanka DFS.
DFS oo war saxaafadeed ka soo saartay Qaraxii Maanta
Wafdi xaqiiqo raadis ah oo uu hogaaminayo C/qaadir Carabow oo gaadhay
Gaadhi Shacab la socday oo lagu qarxiyey jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye
Banaanbaxyadii ka socday dalka Maraykanka oo gaadhay Aqalka Cad iyo 30 magaalo oo kale.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada S.land, Baashe “Faysal C. Waraabe Guddoomiye Xisbi sidan uu yahay ku ahaanmayo, umana Aqoonsanin”
Madaxweyne Trump oo dhaqaalihii iyo xidhiidhkii u jaray Hayadda Caafimaadka Adduunka WHO.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye oo gaadhay Galkaacyo.
Golaha Ammaanka oo mudada hawlgalka u kordhiyay AMISOM.
Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar: “Faysal C. Waraabe, berri dhoweyd wuxu weeraray Galbeedka, maanta wuxu weeraray Bariga”
Madaxweyne xigaha S.land Saylici oo ka jawaabay sababta Ogsijiin iyo Ambulance looga waayey Cisbitaalada.
Qoriddii Afka Soomaaliga
Qoridda afka Soomaaliga ayaa ka mid ahaa waxyaabihii lagu ammaanay dowladdi kacaanka ee Maxamed Siyaad Bare.
Sannadkii 1972-dii ayay ahayd markii ugu horeysay ee la qoro afka Somaaliga, waxaa uuna Maxamed Siyaad Bare aaminsanaa in dadka ay afkooda hooyo uga ciil bixi karaan dhanka waxbarshada.
“Gunnimo cilmi ah ama tacliin ah wax afka hooyo aan ahayn oo naga bixin karo ma jiro taasi markaan baranana cilmigii kale waa badan yahay waana ballaaran yahay wixii lagu baran karo waa uun afka hooyo, mid kale laguma baran karo saa darteed afkii hooyo ayaan dhigeynaa”, ayuu yiri Mr siyaad.
Prof Maxamed Xaaji Raabi wuxuu ka mid ahaa maclimiintii kulliyaddii waxbarashada Lafoole qeybta luuqadaha waxa uuna ka mid ahaa barayaashii ugu horeeyay ee luuqadda Soomaaliga ka dhigta kuliyadda.
Fawziya Yuusuf Haji Adan: “Doorasho aynu galno, si aynu Caalamka uga mid noqono, Afriki waa ay inoo baahan tahay”
Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo sheegay in la sameeyo Guddi Baaritaan oo lagu talogalay Garsoorayaasha Looga shakiyey Laaluushka.
Wafdi Balaadhan oo uu hogaaminayo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland. Abdulrahman Saylici oo booqasho ku tegey Magaalada Boorama “Cabashada reer Borama isku maanaan ogeyn in qori la qaato, Dood furan waa in laga yeesho cabashada Awdal” DAAWO
[Al-Qasas (the Stories): 27]